Global Voices teny Malagasy » Rosiana Mpampihatra Lalàna Miantso ny Hanaovana Selfies Lavitry ny Loza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Jolay 2015 8:09 GMT 1	 · Mpanoratra Tetyana Lokot Nandika Naomy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Saripika, Tanora, Akon'ny RuNet
Efa nitati-baovao tamin'ireo tranga maro nidiran-doza nandritra ny fanaovana selfie tamin'ny finday raitra ny fampitam-baovao rosiana, ary ny vao haingana indrindra izao dia ny nahazo ny vehivavy iray nianjera ka maty  tamin'ny 4 jolay raha handray ny sarin'ny tenany miaraka amin'ny namany teo ambony tetezana iray fandehanan'ny fiara mafy tao Moskoa. Io tranga io sy tranga maro hafa izay niafara tamin'ny fahafatesan'olona no nahatonga ny minisitry ny atitany rosiana hiteny sy hanao fanairana momba ity fanao ity. Nanao valandresaka an-dahatsary hanairana ny Rosiana amin'ity olana ity sy hifanakalo hevitra amin'izay vahaolana azo heverina ny Rosiana, nandrafitra ny hanao valandresaka an-dahatsary miaraka amin'ireo birao rezionaly mitondra ny lohateny hoe “Selfie Lavitry ny Loza ” ny Minisitera amin'ny 7 jolay 2015 [androany], araka ny nolazain'ny solontenan'ny minisitera tamin'ny fampahalalam-baovao TASS.
Lasa arahin'ny fampitam-baovao rosiana maso ny fanaovana selfie amin'ny fisian'ireo tranga maro niteraka faharatrana mafy mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza noho ny fianihana trano avo, fikitihana tariby mitondra herinaratra, na zavatra hafa mety hitera-doza. Misy koa ny tantara sasantsasany, na izany aza, niteraka zavatra maivamaivana kokoa, toy izay nitranga tao amin'ny faritra Kemerovo tamin'ny volana jona raha namaky ny tsangambaton'i Lenina  ny olona mamo iray raha niezaka naka selfie niaraka tamin'io.
Tamin'ny ezaka vao haingana hanabeazana ny kilonga amin'ny fanaovana selfie lavitry ny loza ny sekoly tao Saint Petersburg no nampiditra lesona iray momba ny fiarovana  amin'ny fanao rehefa maka sary amin'ny finday nandritra ny Andron'ny Fampahalalambaovao Tafaray fanao isan-taona, izay notontosaina tamin'ny Oktobra 2015 vantany vao nanomboka kely ny taom-pianarana. Noho ny fanaovana matetika ny selfies hamoahana azy amin'ny tambajotra sosialy, dia nieritreritra ny mpikarakara fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanazarana fiarovan-tena amin'ny fiseraserana Internety izany.
Na dia efa nampitandrina amin'ny loza mety ateraky ny selfies ankinangananga aza ny Minisiteran'ny Atitany Rosiana, dia nandrisika ireo mpampihatra ny lalàna [na antsointsika ihany koa hoe mpitandro ny filaminana] manerana an'i Rosia ry zareo tamin'ny Novambra 2014 handefa selfies miaraka amin'ny reniny  ho fomba iray hankalazana ny Fetin'ny Reny ary “hanatsarana ny fitokisan'ny vahoaka” amin'ny fampiharana ny lalàna. Ireo Rakitsary  natsangan'ny Minisitera tao amin'ny tambajotra sosialy Odnoklassniki sy tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Minisitera no nampiseho sary anjatony  mifandraika amin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/07/71659/
 nianjera ka maty: http://tass.ru/proisshestviya/2093449
 Selfie Lavitry ny Loza: http://tass.ru/obschestvo/2093553
 namaky ny tsangambaton'i Lenina: http://snob.ru/selected/entry/93449
 lesona iray momba ny fiarovana: http://tass.ru/obschestvo/2046751
 selfies miaraka amin'ny reniny: https://tjournal.ru/p/mom-mvd-selflie